Amawebhusayithi okudweba ahlanganisa ukuqoqa noma ukuvuna ulwazi lewebhusayithi kwisitoreji sendawo yesitoreji. Kungenzeka ukuthi uqoqe idatha kusuka kusayithi bese ulondoloza endaweni yendawo usebenzisa i-A1 website URL scraper. Ungakwazi ukuxuba uphinde ulethe ndawonye izinto ezahlukene zewebhusayithi yolwazi ukwenza umkhiqizo ohleliwe wokugcina idatha. Ukwengeza, ungakwazi ukuhlunga ama-URL ukuze uqoqe idatha futhi udale i-CSV kanye namafayela we-SQL. Ungathumela lolu lwazi kumshayeli wendawo noma ulondoloze ku-database njengama-database e-SQL.
Ekuphetheni, iwebhusayithi ye-A1 URL scraper ingakwazi ukulanda ulwazi lwewebhusayithi kwifomethi oyifunayo. Kunamafomethi amaningi ongakwazi ukukhipha idatha kusuka ku-URL scraper. Ngokuyinhloko, ungathola idatha emafomu afana ne-CSV noma amafayela we-SQL. Ukulungiselelwa kokuzenzakalela kungenzeka. Ungakwazi ukusetha uhlelo lokuhlunga lokuqoqwa kwedatha yakho. Ngesilingo samahhala sezinsuku ezingu-30, ungaba ukulungele ukukhipha idatha kumawebhusayithi afana namawebhusayithi wezindaba Source .